Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 20/03/2020)
eMunich, capital eBavaria, likhaya izakhiwo kwiinkulungwane ubudala kwaye iimyuziyam amaninzi. Esi sixeko saziwa ngokuba umbhiyozo yayo yonyaka Oktoberfest kunye neeholo zawo beer, kuquka i Hofbrauhaus esidumileyo, yasungulwa ngo 1589. In the Altstadt (Town Old), central Marienplatz square iqulethe neempawu ezifana Neo-Gothic Neues Rathaus (Iholo yedolophu), nge ethandwayo glockenspiel ibonisa ukuba chimes kwaye reenacts amabali ukususela ngenkulungwane ye-16.
Lo mnyhadala enamandla utywala eka Munich ngathi izitiya utywala kunye Oktoberfest. Inyaniso, lo mbhiyozo yotywala ukuba ibe yimfihlo kakhulu-abagcina sixeko. Yinto kwanabo omdala kunawe Oktoberfest, waqala phakathi kwiminyaka yee-1600 yee-, yi iimonki Paulaner Munich kunye Paulaner Nockherberg na indawo yokuqala umthendeleko utywala kakhulu eMunich kaThixo!
Ukuba azihlanganisele izinto ukuya: starkbier i beer enamandla, ukuba namandla kwikhontenti utywala kodwa eziqinileyo lichithakale, oko ndikuzalisileyo phezulu kwaye sonile kuwe phezulu. Wena ziyaliwe ziye!
Nangona ngemixokelelwane ezinkulu ivenkile enkulu kunye kuthengela zokuphuma kusenokwenzeka ukuba ukwamkela ikhadi lakho lokuthenga ngetyala, zokutyela kakhulu kunye nakwiivenkile eMunich uya kwamkela kuphela ezinkozo okanye EC-amakhadi (efana amakhadi debit). Qinisekisa ukuba euro elaneleyo xa kusetyendziswa ngemihla.
Ufuna babhukishe uloliwe itikiti ku eMunich? Emva koko intloko phezu ku SaveATrain apho uya kufumana itikiti lakho imizuzu kunye No peaky, iimali ezongezelelweyo ezifihlakeleyo!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi kunye sinike nje ngetyala nesihlanganisi kule post blog, okanye cofa apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/nockherberg-starkbierfest-munich-beer-festival/ - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)